Masinin-dranomandry, masinin-dranomandry, milina fanosotra flake - Snowman
MESINY ICE SLURRY
Fujian Snowman Co., Ltd. natsangana tamin'ny volana martsa 2000 ary tanisaina ampahibemaso ao amin'ny Stock Stock ao amin'ny Shenzhen, Desambra, 2011 (Kaody stock: 002639). Snowman, dia orinasa teknolojia avo lenta miaraka amin'ny teknolojia compressor ho fotony, manam-pahaizana manokana amin'ny fampandrosoana, famolavolana, famokarana, varotra, fametrahana ary serivisy aorian'ny fivarotana ny vata fampangatsiahana indostrialy sy fivarotana mangatsiaka ary koa fonosana fitahirizana rafitra sy ranomandry rafitra fanaovana.
Manana foibe indostrialy roa i SNOWMAN ao amin'ny Fujian Fuzhou Binhai Industrial District: Binhai Industrial Park ary Liren Industrial Park. Izay, ny dingana voalohany an'ny Binhai Industrial Park dia mihoatra ny 80 hektara, raha ny Liren Industrial Park kosa dia mihoatra ny 156 hektara. Ny dingana faha-3, Guhuai Industrial Park, izay nomanina dia hahatratra 3000 hektara.
Teknika dyestuff sy simika
Fanamafisana ny beton
Sakafo anaty rano
Refrigeration ho an'ny sakafo
Ity dia vaovao vao haingana avy amin'ny orinasanay .Zahay vaovao farany momba ny orinasa, lahatsoratra momba ny indostria ary lahatsoratra manaparitaka ao amin'ity modely ity indraindray. Faly izahay mizara ireo sokajy ireo aminao, manantena izahay fa tianao